Miyaad ka fikirtay inaad hiwaayaddaada u beddesho ganacsi? | Bezzia
Miyaad ka fikirtay inaad hiwaayaddaada u beddesho ganacsi?
Maria vazquez | 12/01/2022 10:00 | Waqtiyada firaaqada
Weligaa ma ku fikirtay inaad abuurto a ganacsiga agagaarka hiwaayad hal-abuur ama farshaxan? Waxaan hubnaa in qaar badan oo idinka mid ah aad ka fikiri doontaan, laakiin hadhow waxaad dareemi doontaan cabsida inaad booddo, ma khaldannahay? Maanta, ujeedadayadu waa inaad u tixgeliso fursad aad ku kasbato xoogaa lacag ah waxaad jeceshahay inaad sameyso.
Ma ku fiican tahay rinjiyeynta, tolida, haragga samaynta, samaynta dheryaha, tolnimada, ama sawir qaadista? Racfaan in shayga gaarka ah oo dhab ah maanta waa sheegasho in iyada oo loo marayo shabakadaha bulshada waxay kaa caawin kartaa inaad ka shaqeysiiso hiwaayaddaada. Waxaa jira ganacsiyo badan oo faa'iido leh oo sidan u dhashay, laakiin sinaba maaha arrin karti iyo nasiib leh; gadaasha had iyo jeer waa a qorshe, tababar iyo shaqo. Ma doonaysaa in aad ogaato furayaasha aad hiwaayaddaada u rogi lahayd ganacsi? Waanu idinla wadaagaynaa maanta
1 Qorshe samee
2 U fiirso shaqo
3 Tabobar oo weydii
4 U sheeg shaqadaada
5 Abuur isbahaysi iyo wadooyin cusub
In fikradda loo beddelo fursad waxay u baahan tahay qorshe. Y in la sameeyo qorshe Waa in qofku is weydiiyo su'aalo: Miyaan haystaa qalab sax ah si aan hiwaayaddeyda ganacsi ugu beddelo? Dhaqaale ahaan miyaa? Maxaan rabaa in aan ka iibiyo yaase?
Ku raaxaysiga hiwaayadda hal-abuurka leh iyo ka-noolaanshaha ka samayntiisa waa waxyaabo aad u kala duwan. Si aad uga hesho nolol ka baxsan shaqada aad qabato, waa inaad haysataa dhegaystayaal iyo hiwaayaddaada u beddel shaqo. Mise waxa la mid ah si aad hiwaayaddaada ula jaanqaado ganacsiga adag ee dunida tani maaha wax lagu gaadho laba maalmood gudahood.
Iyadoo la tixgelinayo tani waa muhiim qorshee xeelad Laga soo bilaabo bilowgii. Istaraatiijiyad u adeegi doonta hage ahaan inta lagu jiro tallaabooyinka ugu horreeya, kuwa ugu adag! Had iyo jeer maskaxda ku hay in tani ay u baahan doonto wax ka bedel markaad horumarayso. Haddii aad ka baqayso khataraha, marka hore ka fikir xeelad kuu oggolaanaysa inaad kasbato nolol-maalmeedka adoo u shaqeeya wakhti-dhiman dadka kale oo u hibeeya qaybta kale ee hiwaayaddaada. Waxaa jiri doona waqti aad ku dhaqaaqdo.
U fiirso shaqo
Haddii aad rabto inaad lacag hesho waa inaad bilowdo u tixgeli hiwaayaddaada shaqo. Taasi waa, waxaad u baahan doontaa inaad mudnaanta siiso oo aad qorsheysato toddobaad kasta oo ku saleysan kaliya maahan mashaariicda aad bixinayso laakiin sidoo kale shaqooyinkaas dhammaystirka ah ee noqon doona hal-abuur ganacsi.
Inaad ganacsi ka bilowdo hiwaayad aan ku raaxaysanayno waa dhiirigelin, laakiin madax-bannaanida iyo ku-tiirsanaanta naftaada waxay xanbaarsan tahay mas’uuliyado isdaba joog ah. Waxaad u baahan doontaa wakhti aad ku tababarto, si aad wax u abuurto, aad ula macaamilto macaamiishaada oo aad u maamusho qaybta farsamada ee ganacsiga. Iyo haa, ajande si aadan waxba u iloobin.
Tabobar oo weydii
Waxay u badan tahay inaad sannado badan ku qaadatay hiwaayaddaas oo aad hadda ka fikirayso inaad ganacsi u beddesho. Shakina kama qabno inaad sannado badan kasban doonto aqoon kugu kordhisay, laakiin haddii aanad sidoo kale haysan. aqoonta maareynta ganacsiga Way kugu adkaan doontaa inaad ganacsi hore u sii waddo.
Tababarku waa muhiim. Qaado koorsada suuqgeynta iyo ganacsiga khadka tooska ah, xisaabaadka iyo isku xirka si aad u ogaato sida ugu wanaagsan ee looga faa'iidaysto. Oo la xidhiidh xirfadlayaasha isku qaybta ama ururada ganacsiga kuwaas oo kugula talin kara oo ku taageeri kara mashruucaaga. La hadal xirfadlayaasha kale in ay bilaabeen wadadii aad sanado ka hor bilawdeen inta badan waa wax iftiimaya. Waana in ay hore u barteen go’aan xun iyo go’aan wanaagsan, khalad iyo guul.
U sheeg shaqadaada
Maanta, joogitaanka onlaynka waa lama huraan. Shabakadaha bulshadu waa aaladda ugu muhiimsan ee lagu gaadho bartilmaameedkaaga ama bartilmaameedkaaga. Laakiin si aad uga dhex muuqato iyaga waxaad u baahan doontaa samee calaamad xirfadle ahaan, khad garaaf ah oo ay isticmaalayaashu kugu aqoonsadaan taasina waxay kaa dhigaysaa inaad ka soo baxdo tartanka.
Shabakadaha, gaar ahaan Instagram-ka, nashqada astaantani waxay noqotaa mid aad u habboon. Laakin ha soo galin oo kaliya sawirada alaabta; Macaamiisha suurtagalka ah ayaa si dhakhso leh ugu damqan doona shaqadaada haddii aad u ogolaato inay ogaadaan sida aad u shaqeyso, qalabka aad isticmaasho ama waxa lagugu dhiirigaliyo; dhinacaaga ugu gaarka ah.
Ka fakar in marka lagu daro lacag ka samaynta alaabooyinka aad abuurto, aad mustaqbalka bixin karto qalabka iyo furayaasha si uu isticmaaluhu u barto inuu sameeyo hal-abuurkiisa. Waxay noqon doontaa hab aad ku kala duwanaato shaqadaada marka aad ku guulaysato inaad god u sameyso naftaada.
Abuur isbahaysi iyo wadooyin cusub
Wax kasta oo aad sameyso, waxaa mar walba jiri doona qof kula wadaaga aragtidaada faneed. Helitaanka iyaga iyo abuurista is-dhexgalka waxay gacan ka geysan kartaa kobaca ganacsigaaga. Iskaashi Labbada leh profiles kale ee shabakadaha iyo daabacaadaha gaarka ah, waxay had iyo jeer yihiin xulafo weyn.
Waxay kaloo kaa caawin doontaa inaad hiwaayaddaada u beddesho ganacsi abuur siyaabaha cusub ama utility ee alaabtaada oo kaa soocan tartanka. Markaad bilaabayso ganacsi kasta, waa lagama maarmaan in diirada la saaro kala duwanaanshaha.
Weligaa ma ku fakartay inaad hiwaayaddaada u beddesho ganacsi? Soo bood! Haddii aysan ahayn shay u baahan maalgashi bilaw ah oo weyn, isku day! Haddii aad aad uga fikirto, mar kale ayaad tabaysaa. Bezzia waxa aanu balan qaadaynaa in aanu balaadhin doono qaar ka mid ah qodobadan dhawaan anagoo adeegsanayna qalab iyo macluumaad badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » nololeedka » Waqtiyada firaaqada » Miyaad ka fikirtay inaad hiwaayaddaada u beddesho ganacsi?